> Resource > Android > Sida loo wadaag Android Apps la Qaar kale
Ka soo qaad in aad rabto in aad la wadaagto badan waa-leeyihiin barnaamijyadooda Android qoysaska iyo saaxiibada aad, waxa aad samayn doonaa? Haddii aad weli wax fikrad ah uusan innaba wanaag, fadlan akhri this. Maqaalkani waxa uu inta badan ku siinayaa tababare weyn Android - Wondershare MobileGo for Android . Iyada oo ay caawimaad, waxaad si deg deg ah wadaagi karaan barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka Android ama kiniin in Facebook iyo Twitter. Intaa waxaa dheer, in aad fariimaha qoraalka ah ka PC soo diri kartaa in ay la wadaagaan Dalka Chine Android.
Download Tababaraha this Android inay iska share barnaamijyadooda Android.
Talooyin iyo tabaha lagu wadaago barnaamijyadooda Android
Ka dib markii ay soo degsado Tababaraha this Android - Wondershare MobileGo for Android, waa in aad ku rakibi aad kombuutarka. Waxaa Orod inay soo qaadaan suuqa kala xiriir sida shaashadda hoose wuxuu muujinayaa.
Halkan, waxaan kuu soo bandhigaynaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taageeray telefoonada Android iyo kiniiniyada . Waxaa Hubi
Tallaabada 1. Isku qalab Android si aad u PC via cable USB ama WiFi
MobileGo for Android Aad bixisaa laba siyaabood in ay ku xidhmaan telefoonka Android ama miis si PC. Mid ka mid ah waa via cable USB, ka kalena waa la isticmaalayo WiFi. Dooro habka jecel la xidhiidha. Ka dib markii xidhiidhka, telefoonka Android ama miis si degdeg ah loo baari doono ka dibna ku cad suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Share app Android
Hadda, bal aynu u yimid inuu galeeysid bidix ee suuqa hoose. Guji "Apps" oo aad ka heli doonto suuqa kala app ee xaq ah. Halkan, waxaad ka hubin kartaa barnaamijyadooda "size, markii loo xirxiro, badbaadin meesha iyo in ka badan. Sax off Chine in aad jeceshahay in aad la wadaagto dadka kale. Markaas, ka dhigi click midig. Tani waxay keeni doonaa menu hoos-hoos ah. Guji "Share". Markaas, waxaad ka heli 3 doorasho: "Share to Facebook", "Share Twitter" iyo "Share via SMS".
Si aad u wadaagaan app Android inay Facebook ama Twitter, waxaad u baahan tahay inaad gasho xisaabtaada. Markaas, aad arki doonaa content app qaybsiga. Haddii aad rabto inaad la wadaagto Dalka Chine SMS, guji "Share via SMS". Markaas, waxaad ka heli suuqa kala pop-up this. Riix iskutallaabta si ay u muujiyaan oo dhan xiriirada qalabka Android aad. Dooro xiriirada dadka in aad ku socoto in ay la wadaagaan Dalka Chine. Ka dib markii in, guji "OK". Markaas, guji "Send".
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileGo for Android barnaamijyadooda taageero qaybsiga in aad ka soo dejisan oo lagu rakibay, aan ay ka mid yihiin barnaamijyadooda nidaamka.
Taasi waa dhan oo ku saabsan sida loo wadaagayo barnaamijyadooda Android. Way fududahay oo deg deg ah, soo maaha? Dhab ahaantii, marka laga reebo barnaamijyadooda Android, tababaraha this Android sidoo kale ku siinaysaa awood u leeyahay inuu u dhaqaaqo barnaamijyadooda ka kaadhka xusuusta shuruud ah in qalabka Android aad u ogolaanaya. Haddii aad ku rakibtay barnaamijyadooda aad u tiro badan, aad uninstall karaan kuwa aad rabin goobtii.
Isku day MobileGo for Android in ay la wadaagaan Dalka Chine qalabka Android.